ရန်ကုန်မြို့၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံ( ရန်ကုန်) သို့ လစဉ် အလှူဒါနပြုခဲ့သော ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ ဓမ္မပါလကျောင်း နဂါးရစ်တောင် ဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓနှင့် တပည့် သားသမီးများသည် ၁၀.၆.၂၀၁၅ ရက်စွဲက ဆေးရုံသို့ ကျပ်သိန်း(၁၀၀) ထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့ရာ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌဦးမောင်မောင်မှ လက်ခံရယူခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၊မီဒန်မြို့ MEDAN CHARITY GROUP အဖွဲ့ဝင်များသည် ၁၆.၆.၂၀၁၅ ရက်စွဲက ဇီဝိတိဒါနသံဃာ့
ဆေးရုံ (ရန်ကုန်) သို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ
(၆၁၅၅)နှင့် မြန်မာကျပ် (၈၅၀၀၀) လှူဒါန်းရာဆေးရုံအုပ်ချု ပ်ရေးအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးဝင်းလွင်မှ လက်ခံ
ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်)သို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ ဆေးကိရိယာများ
ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာလ (၂၆)
သို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ Japanese
Grassroot Grant Assistance
၈၅၄၁၅ တန်ဖိုးရှိ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ
များ လှူဒါန်းပွဲကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီ
တွင် အဆိုပါ ဆေးရုံကြီး အစည်းအဝေး
ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ သံမှူးကြီး Mr. Maruyama က လှူဒါန်းရခြင်း
အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး လှူဒါန်းသော ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်သော
စာရွက်စာတမ်းများကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်က
ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက အမှတ်တရ လက်ဆောင်နှင့် သစ်သီးခြင်းများ ပြန်လည်ပေး
အပ်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံမှူးကြီးကလက်ခံရယူသည်
ထို့နောက် ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင် ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး
သံမှူးကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် ဆေးရုံတွင်လှူဒါန်းထားသော ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကို လိုက်လံကြည့်ရှု
ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီး(ရန်ကုန်)သို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ လာရောက် လေ့လာခြင်း
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ Unconventional Convention Medical Group မှ အထွေထွေ ရောဂါကု ဆရာဝန်(၂၀)ဦး အပါအဝင်(၅၆)ဦးပါ ကမ္ဘာလှည့်
ခရီးသည် အဖွဲ့သည် Destination Asia (Myanmar) Limited ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယနေ့နံနက်
(၉) နာရီတွင် ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံ ကြီး (ရန်ကုန်) သို့ လေ့လာရန်နှင့် လှူဒါန်းရန် ရောက်ရှိလာကြသည်။
ယင်းအဖွဲ့အား အဆိုပါဆေးရုံကြီး အလှူတော်မင်္ဂလာခန်းမ၌ ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွက် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးအေးမောင်
သန်းက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဒေါက်တာဦးလှမြင့်က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား
ထို့နောက် ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဦးလှမြင့်(၉) က ဆေးရုံ၏ သမိုင်းနှင့် လက်ရှိ တိုးတက်
နေသော ဆေးကုသမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးသည်။ ယင်းနောက် ဧည့်သည်
များက သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) က ရှင်းလင်ပြောကြားပေးသည်။ ယင်းနောက် ဧည့်သည်များသည် အဖွဲ့များခွဲ၍ ဆေးရုံကြီးအတွင်း ဆေးကုသမှုဌာန အသီးသီးသို့ လေ့လာကြည့်ရှုကြရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံပြသပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဧည့်သည်များသည် ဆေးရုံကြီးအတွက် အလှူငွေနှင့် ဆွမ်းတစ်နေ့စာ အလှူငွေကျပ် (၁၈) သိန်း
လှူဒါန်းကြပြီး ဂိလာနသံဃာတော်များအား ကိုယ်တိုင်ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းကြပြီး မှတ်တမ်းတင်
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မျက်စေ့အတွင်းထည့် မှန်ဘီလူးများလှူ ဒါန်းခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆရာတော် Supot Pamudo နှင့် အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံမှ မျက်စေ့လူနာ (၃၀၀) အတွက် မျက်စေ့
အတွင်းထည့် မှန်ဘီလူး အစုံ (၃၀၀) ကို
လှူဒါန်းရာ ဆေးရုံ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်မှ လက်ခံရယူခဲ့
Prof. Dr med. Mathias Langer of Universitats Klinikum Frieburg (FRG) မှ အာထရာဆောင်းစက် (၃) လုံးလှူဒါန်း
Prof. Dr med. Mathias Langer of Universitats Klinikum Frieburg (FRG) မှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ
၁၅၀၀၀.၀၀ တန်ဖိုးရှိ အာထရာဆောင်း
အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်နှင့် အဖွဲ့များမှ
သြစတေးလျနိုင်ငံRotary Club Essendonမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
၅၀၀၀၀.၀၀ တန်ဖိုးရှိဆေးပစ္စည်းများလာရောက် လှူဒါန်း
သြစတေးလျနိုင်ငံRotary Club Essendonမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀.၀၀ တန်ဖိုးရှိ ဆေးပစ္စည်းများ
အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ကလက်ခံခဲ့
Mr. YoshinoyiKomaru(Managing Director) Myanmar YutaniCo., Ltd. က ကျပ်သိန်း(၂၀) တန်ဘိုးရှိသွေးချိုတိုင်းကိရိယာအစုံ(၅၀)လှူဒါန်း
Mr. Yoshinoyi Komaru (Managing Director) Myanmar Yutani Co., Ltd. က ကျပ်သိန်း(၂၀)တန်ဘိုးရှိ သွေးချိုတိုင်း
ကိရိယာ အစုံ (၅၀) လှူဒါန်းရာ ဆေးရုံ
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်
တရုတ်(တိုင်ပေ) ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် အဖွဲ့မှ အလှူငွေလှူဒါန်းခြင်း
တရုတ် (တိုင်ပေ) ဘုန်းတော်ကြီး Ven
Hai Tao နှင့် အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၂
(ရန်ကုန်) အတွက် ငွေကျပ် ၇၅ သိန်း
လှူဒါန်းရာ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၃)
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်) သို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်) သို့
ထာဝရ န၀ကမ္မ ငွေပဒေသာပင် အလှူငွေ
ထိုင်းဘတ် (၁) သိန်းကို ၂၈-၉-၂၀၁၂
နေ့က လှူဒါန်းရာ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.
Pisanu Suvanajata ထံမှ ဆေးရုံ
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်က
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်)သို့ အိုင်အမ်အက်ဖ်မှ ငွေလှူဒါန်းခြင်း
Civic Community Programme
အစီအစဉ်အရ ၀ါရှင်တန်မြို့ အပြည်ပြည်
ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (IMF)
လှူဒါန်းခဲ့ရာ ယင်း လှူဒါန်းငွေကို အဖွဲ့
ကိုယ်စား အဖွဲ့ ဒုတိယ မန်နေဂျာ
Mr.Shinohare က ဆေးရုံ အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ထံ ၃၀.၅.၂၀၁၂ ရက်စွဲက လွှဲအပ်ခဲ့ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအနေဖြင့် ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်) သို့ ပထမ
အကြိမ် ဤသို့ အလေးပေးလှူဒါန်းလာခြင်းကို ပြည်သူများက ၀မ်းမြောက်သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။
Pamudhoနှင့်အဖွဲ့က ၁၁-၂-၂၀၁၂ တွင်
ဆေးရုံကြီးသို့ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၈၂၉၇၈၆
တန်ဖိုးရှိ မျက်စိခွဲစိတ်ရာတွင် အသုံးပြု
သော Megatron Phaco Machineနှင့်
ရာ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
Australia နိုင်ငံ Rotary Club of
Essendonမှ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Steve Roe နှင့်
အဖွဲ့က ၈-၃-၂၀၁၂ နေ့တွင် ဆေးရုံကြီး
သို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ
ရန်ကုန်မြို့ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီးမှ မျက်စိအတု တပ်ဆင်ပေး
လူတို့သည် မိမိ၏မျက်နှာကို မိမိအသက်ပြီးလျှင် ဒုတိယ တန်ဖိုးအရှိဆုံးဟူ၍ ခံယူထားကြသည်။
" (Man Value his face next to his life) " ထို့ကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ယင်း၏ မျက်နှာပေါ်ရှိ မျက်လုံးတစ်လုံး ထုတ်ပစ်လိုက်ရလျှင် ဥပဓိရုပ်ဆင်း ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကြီးစွာသောခံစား
မှုဖြင့် ဆင်းရဲခြင်းများစွာ ဖြစ်တတ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဇီဝိတ ဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီးသည် ဆေးရုံကြီး တည်ထောင်ခြင်း နှစ်(၇ဝ)ပြည့် အထိမ်း
အမှတ်အဖြစ် ယင်းကဲ့သို့သော ဒုက္ခဝေဒနာ ခံစားနေရသူများအား အလင်းရောင် မရရှိသော်လည်း မူလ အသွင်အဖြစ် အနေအထားရှိပြီး နဂို သဘာဝနီးပါး လှုပ်ရှားနိုင်သော မျက်လုံးအတုဖြင့် အစား
ထိုး တပ်ဆင်ပေးရန် (eye prosthesis) စီစဉ်လျက်ရှိရာ မကြာမီအတောအတွင်း အကောင်အထည်
ပေါ်လာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယ္ခုကဲ့သို့ အစားထိုးပေးမည့် မျက်လုံးတုသည် ဇီဝိတဒါနသံဃာ့
ဆေးရုံကြီးတွင် ပုံစံယူ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ မျက်လုံးတစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အရွယ်အစား
အရောင်ကွဲပြားမှုမရှိပဲ တူညီနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်သည် မျက်လုံးအတုပြုလုပ်ရန် ဆေးရုံ
ကြီးသို့ (၃)ကြိမ်မျှသာ လာရောက်ရမည် ဖြစ်ပြီး ပထမနေ့တွင် (၁ဝ)မိနစ်ခန့်၊ ဒုတိယနေ့တွင် (၁ဝ)
မိနစ်မှ (၃ဝ)မိနစ်ခန့်၊ တတိယနေ့တွင် (၅)မိနစ်ခန့်သာ အချိန်ယူပါမည်။
ယင်းအစီအစဉ်အရ ဦးစွာ သံဃာတော်နှင့် သီလရှင်များကို အခမဲ့ပေးလှူ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်
ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ဆေးရုံကြီး၏ မူလရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ အများပြည်သူတို့ကို လူမျိုးမရွေး၊
ဘာသာ မရွေး၊ အဆင့်မရွေး အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် ရှိပါသည်။
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ လှူဒါန်းခြင်းသတင်း။
(၁) ထိုင်းဘုရင့် သမီးတော် မဟာချက်ကရီသီရိဒုံ မင်းသမီး လှူဒါန်းမှု။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅)ရက်မှ (၁၇)ရက်
အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်
ရှိခဲ့သော ထိုင်းဘုရင့်သမီးတော် မဟာချက်
ကရီသီရိဒုံ မင်းသမီးသည် ဇီဝိတဒါန သံဃာ့
ဆေးရုံကြီးသို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၆၀၂၄) လှူဒါန်းခဲ့ရာ ဆေးရုံကြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
(၂) သြစတြေးလျှနိုင်ငံ Essendon Rotary Club မှ ဥက္ကဌ Mrs. Anne Rogers ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှ လှူဒါန်းမှု။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂)ရက်နေ့တွင် သြစ
တြေးလျှနိုင်ငံ Essendon Rotary Club မှ ဥက္ကဌ Mrs. Anne Rogers ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ငွေ (၂၂၀၀၀) ဖုိးရှိ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း
များကို ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီးသို့ လာ
ရောက်ပေးအပ်လှူဒါန်းသွားခဲ့ရာ ဆေးရုံကြီး အုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်က
ကျေးဇူးတင်စကားများ ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
(၃) ရွှေပြည်နန်းအလှကုန် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ လှူဒါန်းမှု။
မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေပြည်နန်းအလှကုန် ပစ္စည်း
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ဇီဝိတ ဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီးသို့ ကျပ် (၁၇ ၀၀၀ ၀၀၀) သိန်းပေါင်းတစ်ရာ့ ခုနှစ်ဆယ်ကို လာရောက်လှူဒါန်းသွားခဲ့ပါသည်။
(၄) မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ အလှူဒါန
ပြီးခဲ့သော၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁၇)ရက်နေ့
အားလျှော်စွာ အလှူရှင်များသည် နံနက်
(၀၈း၀၀) နာရီမှ ညနေ(၁၇း၀၀)နာရီအထိ
ဆေးရုံကြီးသို့ လာရောက်၍ အားထက်
(၅) ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး၏ နှစ် (၇၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုပွဲ
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီးကို ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၈) ရက်စွဲတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ နှစ် (၇၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကို ၂၀၁၀ ခု၊ မေလ(၈) ရက်၌ ဆေးရုံကြီးတွင် ကျင်းပသွားရန်ရှိပါသည်။ ယင်းနေ့တွင်ပင် လုပ်အားဒါန အလှူရှင် စေတနာဆရာဝန်ကြီးများအား ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ အထူးတာဝန်
ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်
ပေးအပ်ခြင်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပသွားရန် ရှိပါသည်။
ထိုင်းအစိုးရနှင့် ထိုင်းတပ်မတော်တို့မှ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီးသို့ သွားဆေးကုသခန်းနှင့် သွားစိုက်ခုံများ လှူဒါန်းခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.BansarnNunnagနှင့် စစ်သံမှူး ol.Ekachai Harnpoonvittaya သံရုံးအဖွဲ့
၀င်များသည် ဇူလိုင်လ ၂၃ရက် နံနက် ၁၀
နာရီတွင် ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ ဆေးရုံးကြီးသို့ လာရောက်ရာ ဆေးရုံ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
ရှေးဦးစွာ သံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် အတွင်းလူနာအဖြစ် တက်ရောက်နေသော သံဃာတော်များကို ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းကြပြီး လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို ကျင်းပရာ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးတင်လှက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်
ဆက်လက်၍မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးကထိုင်းအစိုးရနှင့်ထိုင်းတပ်မတော်တို့အနေဖြင့် လှူဒါန်းရခြင်း အကြောင်းကို ပြောကြားပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၇၃၅၇) တန်ဖိုးရှိ သွားစိုက်ခုံနှင့် သွားဆေးကုသခန်း (၁)ခန်း၊ ဆွမ်းတစ်နေ့စာ ကျပ် (၃)သိန်း လှူဒါန်းရာ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်ကလက်ခံပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဥက္ကဌက ဂုဏ်ပြုလွှာများနှင့် အမှတ်တရ သစ်သီးခြင်း ပေးအပ်
ထိုင်းသံအမတ်ကြီး၊ စစ်သံမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် လှူဒါန်းထားသော သွားစိုက် ခုံများနှင့် သွား
ဆေးကုခန်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌနှင့်အတူ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီးအနေဖြင့် ပြည်သူ များ၏လှူဒါန်းသောငွေ၊ ပစ္စည်း၊ စေတနာ ဆရာဝန်ကြီးများ၏ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာလုပ် အား အလှူ၊အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၏ စီမံ ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်အားအလှူနှင့်ဝန်ထမ်းများ ၏စေတနာအပေါ်အခြေခံသောဝန်ဆောင်မှု များ အပေါ်တွင် ရပ်တည်လျက် ရှိပါသည်။
ဆေးရုံကြီး အလှူခံဌာနကို ပိတ်ရက်မရှိ ၊ နံနက် (၀၈း၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၄း၃၀) နာရီ အထိ ဖွင့်လှစ်ထား ရှိပြီး ၊ ရုံးချိန်ပြင်ပတွင် တာဝန်မှူးများက လက်ခံပါသည်။ ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ိ/နှင့် အထက် အလှူရှင်များကို ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်အတူ လှူဒါန်းသည့် ဓါတ်ပုံကို ချက်ချင်း ရိုက်ပေးခြင်း၊ စားသောက်
ဖွယ်ရာများ ဖြင့်ဧည့်ခံခြင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆေးရုံအကြောင်း သိကောင်းစရာများကို ရှင်းလင်း
ပြောကြားပါသည်။ အလှူရှင်များအနေဖြင့်လှူဒါန်းမှုအတွက်ရေစက်ချလိုပါကဘုရားခန်းတွင် နေ့စဉ်
ရှိနေသော သံဃာ တစ်ပါးက၊ ရေစက်ချ တရား ဟောကြားပေးပါသည်။
နေ့စဉ်ရရှိသော အလှူငွေနှင့်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစာရင်းရေးသွင်းပြီး ငွေများကို ဘဏ်များတွင် စာရင်းရှင်ဖွင့်၍လည်းကောင်း၊ ငွေစုစာရင်းဖွင့်၍လည်းကောင်းထားရှိသည့်အပြင် အစိုးရငွေစုလက်မှတ် များကိုလည်း ၀ယ်ယူထားပါသည်။
ငွေစာရင်းများကို လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့
စာရင်း ကိုင်အဖွဲ့က (၃)လ တစ်ကြိမ်
စစ်ဆေးပြီး၊ ပြက္ခဒိန်နှစ် ကုန်ဆုံးသည့်
စာနှင့်လက်ကျန် ရှင်းတမ်းများ ရေးဆွဲ
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ လစဉ် အစည်းအဝေးများတွင်လည်း ဘဏ္ဍာရေးမှူးက ငွေကြေးလည်ပတ်သုံးစွဲမှု
အခြေ အနေကိုတင်ပြအတည်ချက် ရယူရပါသည်။ ဤဆေးရုံကြီးကို ပြည်တွင်း အလှူရှင်များအပြင်
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မိမိတို့မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်သည့်အခါတွင်လည်း
ကောင်း၊ မြန်မာပြည်ရှိဆွေမျိုးသားချင်းများမှ တစ်ဆင့်လည်းကောင်း လှူဒါန်းကြပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများမှာ နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိစဉ် လာရောက်လှူဒါန်း
ကြပါသည်။ ထို့ပြင်အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်ပလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကလည်း အခါအားလျော်စွာ